Ihe ndozi nke ekeresimesi eji akpukpo kaadiboodu - Oru uzo na nke mbu | Crafts Na
Ihe ndozi ekeresimesi eji akpukpo kaadiboodu
Alicia tomero | | Ihe eji eme ekeresimesi, Crafts maka ụmụaka
Maka ekeresimesi a anyi nwere ike ime umuaka ndia na ihe omuma. Anyị nwere ike egweri ụfọdụ kaadiboodu akpa iji mee ka ha dị n'ụdị kandụl na ọbụna Angel nke mbụ nwere ọtụtụ ihe na-egbu maramara.
Ha bụ ọrụ aka dị mfe ịme na anyị nwere ike ime n'ehihie. Nanị ihe ndọghachi azụ bụ na ọ bụrụ na anyị ejiri silicone na-ekpo ọkụ anyị ga-akpachara anya na ụmụaka anaghị achịkwa ya yana na maka obere obi abụọ anyị nwere vidiyo ka ị wee hụ otu esi eme ha site na nkwụsị.
1 Ihe ndi m ji bia bu:
2 Ihe ndozi yiri kandụl
2.3 Nzọụkwụ nke atọ:
2.4 Nzọụkwụ nke anọ:
3 Ihe ịchọ mma nke mmụọ ozi
3.3 Nzọụkwụ nke anọ:
Ihe ndi m ji bia bu:
Uhie, acha odo odo, agba aja aja na kaadị kaadi ọcha.
Ihe na-acha ọla edo na-acha ọla edo.
Ngwunye ọkpọkọ ọla edo.
Ihe nchara pink.
Hot silicone na egbe.
Obere kandụl nke nwere ire ọkụ iji wube tubes.
Ihe ndozi yiri kandụl
Anyị na-ebipụ otu kaadiboodu na-acha uhie uhie hà ka otu nke tubes ma jiri silicone na-ekpo ọkụ rata ya. Anyị na-eme otu ihe ahụ na kaadiboodu na-acha odo odo na anyị ga-arapara na ọkpọkọ ahụ.
Anyị na-emeghe windo na tubes ọ bụla. Anyị na-arụ okirikiri abụọ nke ihe dịka 6 cm, otu agba aja aja na odo odo. Anyị na-adọta ọkụ abụọ freehand iji tinye ha na gburugburu wee bepụ ha. Anyị mere otu na kaadiboodu beige iji rapara ya na gburugburu odo yana nke ọzọ na edo edo itinye ya na gburugburu beige.
Nke ebipụsịrị ire ọkụ anyị na-anyagide ha n'ime gburugburu. Anyị na-etinye obere silicone n'ime ọkụ na anyị fesa ewute ọlaedo ịrapara. Na-acha odo odo-oroma welara anyị na-ese eriri ndị na-esi n’ire ọkụ apụta ime ka ọ dị ka ọ dị adị karịa.
Anyị na-eme ụfọdụ egbutu n'akụkụ nke ọkpọkọ na anyị na-etinye okirikiri iji debe ire ọkụ ahụ. N’ikpeazụ, anyị na-ejupụta kandụl ndị na-arụ ọrụ n’ime tubes ahụ, anyị ga-enwekwa ọrụ aka anyị.
Ihe ịchọ mma nke mmụọ ozi
Anyị na-ebipụ otu mpempe akwụkwọ nke kaadiboodu nke hà nhata ka paịpụ kaadiboodu ma jiri ya na silicone dị ọkụ kpoo ya.
Anyị na-ewere ọkpọkọ ahụ ma debe ya na kaadiboodu ọcha na anyị na-ese otu okirikiri nke otu nha karịa gburugburu nke ọkpọkọ ahụ. Anyị bepụ ya ma dọrọ anya, ọnụ na mmechi. Anyị na-agbanye gburugburu na ọkpọkọ.
Anyị na-adọta freehand otu n'ime nku nku mmụọ ozi tinyere obere oghere dị n'etiti nku abụọ ahụ ka ọ ga-arapara na ọkpọkọ. Anyị na-ebipụ nku a dọtara, pịa ya ma chọpụta n'akụkụ nke ọzọ nke nku ahụ n'otu ụzọ ahụ. Anyị gwụchara ya ma pịa nku na ọkpọkọ. Nwere ike ile vidio ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ otu esi eme ya.
Anyị na-ewere ọkpọkọ nhicha na anyị na-apịaji ya na-eme hoop. Anyị ga-ahapụkwa warara n'okpuru mgbanaka ahụ ka anyị rapara na ọkpọkọ ahụ ma jiri mgbịrịgba ahụ mechie mgbanaka ahụ. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe ọrụ anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Oge pụrụ iche » Ihe eji eme ekeresimesi » Ihe ndozi ekeresimesi eji akpukpo kaadiboodu
4 nka onyinye echiche